Venise, miantsena amin'ny tanànan'ny lakandrano | Vaovao momba ny dia
Venice Io no iray amin'ireo tanàna tsara indrindra eran'izao tontolo izao, any avaratra atsinanan'i Italia. Ivon-kolontsaina sy zavakanto izy ary malaza be amin'ny tranombakoka, ny maritrano, ny tanàn-dehibe ary ny tontolon'ny zavakanto ary mazava ho azy koa ho an'ny lakandrano.
Betsaka ny olona tonga any Venise te hahafantatra isaky ny vazan-tanàna ary koa hahafahana mitaingina gondola malaza. Raha ny fanisam-bahoaka tamin'ny 2004 dia nisy mponina teo amin'ny 270.000 XNUMX teo, na dia azo antoka aza fa misy maro hafa ankehitriny.
1 Ny tanànan'i Venise
2 Ny olan'ny ranomasina ao an-tanàna
3 Fiantsenana ao an-tanànan'i Venise
Ny tanànan'i Venise
Ny ampahefatry ny mponin'i Venise ihany no monina ao afovoan-tanàna manan-tantara, ny sisa miaina amin'ny tanibe. Ny fomba fitaterana lehibe any amin'ireo nosy dia amin'ny alàlan'ny sambo izay mandeha mandritra ny tontolo andro amin'ireo lakandrano maro ananan'ny tanàna. Ny làlambe lehibe indrindra dia ny Canal Grande izay mamakivaky ny afon'i Venise.
Tetezana an-jatony no mampifandray ireo nosy kely amin'ny lagoon Venetian. Ny gondola dia toeram-pizahan-tany ihany, satria amin'ny fampiasana azo ampiasaina ny sambo maotera dia mivezivezy amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa. Afaka mandehandeha an-tongotra any amin'ny nosy ny olona na mampiasa ireo antsoina hoe bus fitaterana rano.
Raha mandeha any Venise ianao dia tsy halahelo an'i St. Mark's Square, eo afovoany. Ny fiangonana malaza indrindra ao an-tanàna dia ny Basilica an'ny San Marco sy ny Doge's Palace, izay tranon'ny mpanapaka an'i Venise nandritra ny an-jatony taona, ireo no tena manintona ny kianja. Toy ny hoe tsy ampy izany, raha te hiala voly ianao dia toerana mety satria kianja fizahan-tany voahodidin'ny kafe sy mpivarotra izany.
Amin'ny faritra ivelany amin'ny lagoon dia ahitanao ny nosy Lido isika 12 km ny halavany ary toerana misy mponina 20.000 XNUMX eo ho eo no mipetraka. Miaraka amin'ireo zavamaniry fasika mahafinaritra dia mahasarika mponina an'arivony isan-taona, indrindra amin'ny fahavaratra. Ny Venice Film Festival dia iray amin'ireo mpizahatany lehibe isan-taona, hetsika tsara ho an'ny rehetra izany!
Ny olan'ny ranomasina ao an-tanàna
Ny toerana misy ny tanàna miakatra amin'ny haavon'ny ranomasina sy ny fiakaran'ny maripana dia niteraka olana maro tamin'ny tanànan'i Venise. Nandritra ny an-jatony taona maro, ity tanànan'ny Mediteraneana ity dia tototry ny onja mahery, ka niteraka fahasimbana lehibe ho an'ny natiora ary koa ho an'ny mponina ao aminy.
Manomboka amin'ny Novambra ka hatramin'ny Febroary dia miakatra hatramin'ny iray metatra sy sasany ny haavon'ny ranomasina ary manarona faritra maro malaza any Venise. Ny rano masira ao amin'ny ranomasina dia nanimba ny fototr'ireo tranobe maro ary ilaina ny fanamboarana hatrany mba tsy hijerena fahasimbana ireo trano ireo ka mety hitera-doza ho an'ny mponina. Miditra amin'ny tranobe ny rano ary manimba ny rindrina sy izay rehetra eo amin'ny lalany. Ny rano dia nahatonga ny fototry ny tranobe maro tsy haharitra.
Nanomboka nilentika ireo nosy ary isan-taona dia manodidina ny 3 ka hatramin'ny 4 mm ny ambany. Miasa amin'ny fanamboarana vavahady vy ny mpamorona mba hampijanona ny ranomasina hiditra ao amin'ny lagoon ary hanjary hilentika hatrany ireo nosy. Amin'ity taona ity dia tsy maintsy mandeha izy ireo.
Araka ny hitanao, Venice dia tena tsara tarehy sy idealy handeha vakansy ary hahafantatra an'ity tanàna mitsingevana eo anelanelan'ny nosy amin'ny lagoon ity. Saingy ho an'ny mponina marobe amin'ilay toerana dia tsy mampahazo aina mihitsy ny miaina anaty rahona atahoran'ny rano foana.
Fiantsenana ao an-tanànan'i Venise
Eto isika dia hahafantatra izay faritra tsara indrindra hovidiana sy inona no azontsika vidiana eto an-tanàna. Ka raha te-hivezivezy any Venise ianao dia ho fantatrao izay tokony halehanao hividy izay ilainao.
Eto isika dia afaka mahita avy amin'ny tsenan'ny trondro nentim-paharazana amin'ireo ozinina fitaratra maoderina indrindra izay anangonana ny kalitaon'ny vera Murano. Torohevitra iray, ampitahao tsara ny vidiny ary aza manaiky hofitahan'ny mpivarotra, ny vidiny dia samy hafa be amin'ny orinasa iray hafa ary azo antoka fa raha mikaroka tsara ianao dia hahita izany amin'ny euro maromaro.
Ny sasany amin'ireo vokatra tena mampiavaka an'i Italia dia amidy eto ary zavatra izay matetika vidiana amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona dia ny saron-tava nentin-drazana sy saron-karnavaly na ireo lamba volon-doko malaza.
Tsy misy tobim-barotra hita ao amin'ny toerana iray Fa kosa, ny tanàna iray manontolo dia toy ny tsena lehibe ahafahanao manao ny varotrao, na dia mila zavatra ambony kokoa toa an'i Benetton na Calvin Klein aza isika dia tsy maintsy mandeha any amin'ny faritra misy ny gara sy ny San Marco Square.
Toerana iray izay tsy maintsy hividianantsika tsy misy fialan-tsiny dia ny nosy Burano efa Murano hividy dantelina sy krystaly tsirairay avy. Malaza iraisam-pirenena ny vera Murano ary afaka mahita asa maro isan-karazany ianao, manomboka amin'ny fananganana biby, hatramin'ny tranobe amin'ny alàlan'ny gondola, firavaka na jiro lehibe feno kristaly kely aza.
Ny trano fisakafoanana dia mihidy ny alarobia tolakandro ary ny akanjo sy ny fivarotana fanomezana dia mihidy ny alatsinainy maraina Na dia, amin'ny fitsipika ankapobeny aza, ny ora dia manomboka amin'ny 09 ora ka hatramin'ny 19:30 hariva. Ny VAT napetrak'izy ireo tamin'ny vokatra dia miankina amin'ny sanda ananany.
Ireo mpandeha tsy eropeana dia tsy maintsy mitazona faktiora ho an'ny fividianana mihoatra ny 155 euro raha te hitaky famerenam-bola VAT ao amin'ny seranam-piaramanidina Marco-Polo na Treviso, toerana iasan'ny orinasa Air Europa ary manome sidina mora vidy mankany Venise.
Ireto misy zava-misy mahaliana izay azo antoka fa ho mora ampiasaina hahalala tsy hoe hahalala bebe kokoa momba an'io tanàna mitsingevana sy mahaliana kokoa io, fa mba hahafahana mividy miaraka amin'ny mason-tsivana koa ary ny mpivarotra dia tsy manandrana manome anao vola bebe kokoa fotsiny satria olona vahiny ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Venise, miantsena amin'ny tanànan'ny lakandrano
Salama, ny antifasanao dia milay, fa ny tiako ho fantatra dia ny prosao rehetra hahafahako manandrana manao ok.
faNy maRtiNez dia hoy izy:
MISY NY VDD TIAKO IREO tatitra REHETRA MINI ARY misaotra anao manome ahy hevitra hanatonana sy izay hataoko ankehitriny fa eo ianao ... Mahafinaritra tokoa ny maska ​​nanompo ahy ho an'ny asa any am-pianarana ary tsara ho anao, betsaka NY CONGRATULATIONS ho an'ireo izay nanoratra fa tena tatitra tena mangatsiatsiaka be La Neta
Mamaly an'i faNy maRtiNez
Làlana iray hahitanao ireo harena violet an'ny Provence